मनोरञ्जन Archives | Page 156 of 182 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
दीपेन्द्रको प्रेमकथामा ‘दीपेन्द्र सरकार’ बन्ने, प्रदिप खड्का मुख्य भूमिकामा देखिदै/के खुल्ने छ दरबार हत्याकाण्ड?
यस अगाडि चलचित्र ‘चंखे शंखे पंखे, प्रेमगीत र प्रेमगीत २’ निर्माण गरेको आशुषेन फिल्मस्ले आफ्नो ब्यानरमा चौथो चलचित्र ‘दीपेन्द्र सरकार’ बनाउने भएको छ । आज काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्... Read more
रणवीर कपुर छेपारोदेखि डराउँछन्ः आउनुहोस् हेरौ अन्य चर्चित सेलिब्रिटीहरु के सँग डराउँछन्
भनिन्छ, डरको अगाडि विजय छ । तर, केही डरहरु यस्ता हुन्छन्, जो मानिसको मनमा घर बनाउँछन् । यसलाई हटाउन मुश्किल हुन्छ, यो कमजोरी बनेर पनि देखा पर्छ । बलिउड स्टारहरु पनि यसबाट टाढा छैनन् । १. संज... Read more
विवाह गरेर मैले जीवनकै ठुलो भुल गरेँः मनिषा कोइराला !
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपाली ब्यापारी सम्राट दाहालसँग विवाह गर्नु आफ्नो जीवनकै ठुलो भुल भएको बताएकी छिन् । ‘म विवाह गर्नु चाहन्थे र विवाहका बिषयमा मेरो काल्पनिक बिचार थि... Read more
ब्वायफ्रेण्डसंग रातभर कुरा गर्दा पिटाई खाएँ – प्रियंका कार्की !
काठमाडौ । किशोरावस्थाको १८ वर्षसम्म टेनसन समस्या कति पनि हुन्न सबै कुरा हाम्रो परिवारले हेर्दीएको हुन्छ । त्यसैले यो पल जिन्दगीको रमाईलो पल हो । त्यो बेलामा खासै हाम्रो करियर सुरु भएको हुँदै... Read more
सोल्टी होटलमा भेटिए विदेशी महिलासँग राजेश हमाल, एका एक भाइरल भए तस्विर !
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा दिनानुदिन सक्रिय बन्दै गइरहेका महानायक राजेश हमालले बिहिबार सोल्टी होटेलमा खिचेका केही तस्विरमध्ये राजेश एक विदेशी महिलासँग खिचेको तस्विर अहिले भाइरल बनिरहेको छ।... Read more
नोकरानीसँग यी चर्चित बलिउड अभिनेताहरुले शारीरीक सम्बन्ध बनाएपछि…
एजेन्सी–बलिउडमा केही यस्ता कलाकारहरु रहेका छन् जो आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकरानीसँग यौन सम्बन्ध बनाएकै कारण चर्चामा रहे । करिअरको उच्च बिन्दुमा रहेका साइन अहुजा आफ्नै घरमा काम गर्ने नोकरानीसँग... Read more
चामल चोरेर फिल्म हेर्थें !
रेडियो नाटकमा होस् या टेलिभिजनमा अभिनय, सुरवीर पण्डितको अभिनयको तारिफ हुन्छ । विभिन्न भूमिकामा अभिनय गर्न सक्ने सुरवीरको जीवन कलाकारितमै बूढो भइसक्यो । तर, उनी यो पेसामा अझै जुझारु देखिन्छन्... Read more
लन्डन १७ जेठ – २१ मे साँझ बेलायतस्थित नेपाली पत्रकारहरु आपत्कालीन कोषका लागि एउटा च्यारीटिमा व्यस्त थिए । नेपालबाट लोक गायक खडग गर्बुजा आउने तय थियो । तर दुर्भाग्य च्यारिटीको अघिल्लो दिन हिथ... Read more
यी हुन् सन् २०१७ का विश्वकै उत्कृष्ठ पाँच कार
एजेन्सी । विश्व अटो बजारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने सवारीसाधन हो कार । कार दैनिक प्रयोगका लागि प्रयोग हुने सवारीसाधनमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त साधन हो । मुल्य र क्षमता अनुसार विभिन्न कम्पनिका... Read more
‘बाहुबली’ फिल्मका निर्देशक एसएस राजमौलीको कहाँ कति छ सम्पत्ति
एजेन्सी, १६ जेठ । बलिउडमा लगातार बल्कबस्टर फिल्महरु बनाएर चर्चामा आएका निर्देशक हुन् एसएस राजमौली । राजमौलीले पछिल्लोपटक बनाएको फिल्म बाहुबली २ ले १५०० करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार... Read more